laacib » Maamulka Borussia Dotmund Oo Kulan Deg Deg Ah La Qaadanaya Xidiga Falaagada Kooxdiisa Ku Noqday Ee Ousmane Dembélé Iyo Waqtiga Go’aankooda La Ogaan Doono.
Maamulka laacibkii Borussia Dortmund ayaa iclaamiyay kulan deg deg ah oo ay doonayaan in ay la yeeshaan xidiga kooxdooda falaagada ku noqday ee Ousmane Dembélé kaas oo qalbiga gashaday in uu Camp Nou ku biiro. Da’yarka ree France ayaa qasab ka dhigaya in Barcelona laga iibiyo kadib wada xaajoodyo ay masuuliyiinta labada kooxood yeesheen balse ay Dortmund ku diiday dalabkii ay Barcelnona ku doonaysay 20 sano jirkan ree France.
Tababaraha laacibkii Dortmund ee Peter Bosz ayaa Sky Sports qaybtiisa Germany waxa uu u sheegay in kooxdiisu ay kulan deg deg ah la yeelanayso Ousmane Dembélé si ay uga wada hadlaan mustaqbalkiisa, wuxuuna kulankani dhacayaa caawa markaas oo uu Ousmane Dembélé soo hor fadhiisan doono Peter Bosz iyo masuuliyiinta kale ee Dormtund waxaana si furan looga wada hadli doonaa haddii uu Dembele badali karo go’aankiisa oo uu laacibkii ku sii nagaan karo.
Laakiin waxay wararku sheegayaan in Peter Bosz uu Dembele ula hadli doono si furan iyada oo haddii uu xidigani diido in uu laacibkii sii joogto loo ogolaan doono inuu laacibkii ka bixi karo. Waxaa dhinaca kale ay Dortmund u furnaan kartaa in ay aqbasho dalabka Barcelona oo ah 90 milyan euros iyo 30 milyan oo dheeraad ah oo qaab ciyaareedka Dembele ee Barcelona ku xidhan.
Tababaraha laacibkii Borusssa ee Peter Bosz ayaan doonayn in muranka Dembele uu kooxdiisa ku sii dhex jiitamo wuxuuna doonayaa in si deg deg ah loo go’aamiyo haddii uu laacibkii ka baxayo iyo haddii uu go’aankiisa badalayo.